FAQ : Social Security
1. सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुन कुन वर्गका व्यक्तिहरुले पाउँछन् ?
2. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानून लागू भएको छ ?
3. भत्ता पाउने व्यक्तिको उमेर गणना गर्दा के लाई आधार मानिन्छ ?
4. नागरिकतामा जन्मेको साल र महिना खुलेको तर गते नखुलेको अवस्थामा केलाई आधार मानिन्छ ?
5. बाल पोषण भत्ता प्राप्त गर्नेको हकमा उमेरको गणनाको लागि केलाई आधार मानिन्छ ?
6. बाल पोषण भत्ताको लागि अस्पतालले प्रदान गर्ने जन्मको प्रमाण पत्र भए पनि हुन्छ ?
7. कुन कुन अवस्थामा दोहोरो भत्ता लिन पाईदैन ?
8. कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढि लक्षित समूहमा परेमा के सबै समुहबाट भत्ता लिन पाउँछ ?
9. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनको लागि कहिले, कहाँ निवेदन दिनु पर्दछ ?
10. निर्धारित समयभित्र निवेदन दिए पश्चात् भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीहरुलाई परिचय पत्र कसले दिने गर्दछ ?
11. के परिचय पत्र नभएका व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सक्छन् ?
12. सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका व्यक्तिहरुले पनि परिचय पत्र नवीकरण गर्नुपर्दछ ?
13. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वर्षमा कति पटक वितरण हुन्छ ? के हरेक महिना भत्ता वितरण हुन्छ ?
14. कुनै एक चौमासिकमा भत्ता वितरण गर्दा उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले अर्को चौमासिकमा भत्ता लिंदा पहिलाको चौमासिकको भत्ता लिन पाउँछ की पाउँदैन ?
15. अघिल्लो आ.व.मा भत्ता लिन नआएका व्यक्तिले चालु आ.व.मा भत्ता पाउँछन् की पाउँदैनन् ?
16. के सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबैको घर घरमा गएर वितरण गरिन्छ ?
17. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत प्राप्त भत्ता कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
18. कुनै व्यक्तिको भत्ता परिवारको सदस्य वा नजिकको कुनै अन्य व्यक्तिलाई हस्ते गरी दिन मिल्छ की मिल्दैन ?
19. बैंक मार्फत भत्ता वितरण गर्नु भनेको के हो ?
20. बैंक मार्फत भत्ता वितरण हुने बैंकमा समेत लाभग्राही उपस्थित हुनुपर्दछ ?
21. बैंक खातामा जम्मा भएको रकम कति समयभित्र निकाली सक्नुपर्दछ ?
22. बैंकमा खाता खोल्दा कुनै रकम तिर्नुपर्दछ ?
23. कुन कुन अवस्थामा भत्ता पाइरहेका व्यक्तिहरुको लगत कट्टा गर्नुपर्दछ ?
24. गलत व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा वापतको भत्ता रकम लिएमा वा गलत व्यक्तिलाई भत्ताको लागि सिफारिश गरेमा कुनै कारवाही हुन्छ की हुँदैन ?